"Youth Society for Education" 501(c)(3) Non-Profit Organization မှဦးစီး၍ "Teacher Development Training Workshop" သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ရာ • Early Childhood Training & Development • Great Teacher Role • Child Psychology • Psychology of Teaching စသည့် ဘာသာရပ်များကို ပို့ချမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် –––––––––––––––––––– • အနာဂတ်၏ မီးအိမ်ရှင်လေးများ ဖြစ်ကြသော ကလေးငယ်များအား စနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်တတ်သော မိခင်ကောင်းများ ဖြစ်လာစေရန် • ကလေးငယ်များအား ကာယ (PQ)၊ ဥာဏ (IQ)၊ စိတ်ဓာတ် (EQ)၊ လူမှုဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေမှု
အခြေခံဖြစ်သော စိတ်ဓာတ်ကောင်း (SQ) ရရှိရန်အတွက် ပညာသင်ကြားရာ၌ ကလေးစိတ်ပညာ (Child Psychology) ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဆရာ၊ ဆရာမများ ဖြစ်လာစေရန်
Speaker - Professor Daw Thet Htar Win Date - November 25th, 2017 & November 26th, 2017 Time - 10:00 a.m. to 4:00 p.m. Location - 524/E, 5th Floor, Ocean Condo,9Mile, Mayangone Township, Yangon, Myanmar Lunch - Coffee & Snack
Workshop Fee - 40,000 MMK
For More Information, Contact Us: ––––––––––––––––––––––––––––––––
Ayeyar Maung Maung (Program Manager) Phone : 09444948499 Email : ayeyar@ysenpo.org
Htet Myat Naing (Member Organizer) Phone : 09770848892 Email : htetmyatnaing1861997@gmail.com
Website : www.youthsocietyforeducation.org
Thank you! Please join us!